Real Madrid oo Taariikh dhigtay kaddib markii ay ku guuleystay Club World Cup…SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo Taariikh dhigtay kaddib markii ay ku guuleystay Club World Cup…SAWIRRO
(Abu Dhabi) 16 Dis 2017. Real Madrid ayaa soo xareystay Club World Cup kaddib markii ay 1-0 uga adkaatay naadiga Gremio, waana kooxdii ugu horreysay ebid ee labo jeer oo is xigta ku guuleysata koobkan.
Balse markii la isku soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta daqiiqadii 53-aad, Cristiano Ronaldo ayaa goolka u dhiibay Real Madrid.
Wuxuu dhaliyay Free Kick oo cajiib ah kaa oo noqday kii 34-aad uu kooxda u dhaliyo.
Sidoo kale Goolka ayaa Ronaldo uga dhignaa kiisii 7-ad uu ka dhaliyo Koobka Kooxaha adduunka waana midka ugu goolasha badan taariikhda koobkan oo wuxuu iska reebay Messi iyo Suarez oo lahaa min shan gool.
Los Blancos ayaa taariikh dhigtay kaddib markii ay noqotay kooxdii ugu horreysay Taariikhda ee difaacata Koobka Kooxaha adduunka amaba haddii si kale loo dhoho kooxdii ugu horreysay oo labo jeer oo is xigta ku guuleysata.
Ma aragtay sida uu iska dhigay Didier Drogba?..(Eeg SAWIRKA hana QOSLIN)
GOOGOOSKA: AS Roma vs Cagliari 1-0 (Roma oo ku ribixday guul ay u rafaadday)